Amandla okuzindla kanye nokucabanga kwezemidlalo - THE INDIAN FACE
Leticia Montoya Ezempilo Nokuqeqeshwa
Ubuciko bokuphila ngokuqaphela.
Izindatshana ezedlule zike zaphawula ngezinzuzo zokwenza Ukuzivocavoca Nokuzindla ekulawuleni ukukhathazeka nokucindezeleka noma ekuphatheni imizwa, phakathi kokunye ukusetshenziswa okuningi. I- ukucabanga, qaphela ukuncenga, ukucabanga noma ukucabanga, kusezindebeni zawo wonke umuntu, ngoba ngubani ongezwanga ngokucabanga? Sihlaselwa yisidingo sokwenza lo msebenzi nenqwaba yezinzuzo onazo. Kodwa ingabe siyazi ngempela ukuthi iyini? Futhi okubaluleke kakhulu, siyazi ukuthi kwenziwa kanjani?
Ukucabanga kusho ngokunaka ngokucophelela ulwazi lomzuzu wamanje ngaphandle kokudlala, ngentshisekelo, ilukuluku nokwamukelwa. Kuchazwa njengomzuzu wobukhona obugcwele nokuziqonda okugcwele kwakho nesimo. Kepha, manje ake sicabange, zingaki izinto esizenzayo ngokucabanga kosuku lonke? Awudli ngisho nokudla, udla kangaki ubuka i-TV, ocingweni, uphendula iWhatsApp, ubheka ukuxhumana nomphakathi noma ucabanga ukuthi yini okufanele siyenze ngokulandelayo?
Este okweqile kwesikhuthazi futhi of umthwalo ingqondo kwakha ukusabalala kanye nokukhathala kwengqondo okungaphazamisa isihlungi esibona ngaso izinto nokuthi sizihlaziya kanjani. Yini ethinta indlela esizizwa ngayo, indlela esiziphatha ngayo futhi ekugcineni nendlela abanye abasibona ngayo.
Ukucabangela akuyona into emisha kwezemidlalo, uPhil Jacksons, owayengumdlali we-basketball nomqeqeshi, onerekhodi lokuwina izicoco eziyi-11 ze-NBA. Njengomqeqeshi wayenefilosofi “umoya owodwa, umqondo munye"" Umoya owodwa, umqondo munye. " Wasebenzisa ukucabanga ekuqeqesheni futhi kamuva emincintiswaneni, ethembele emcabangweni omkhulu wokuthi njengoba abadlali beNBA benza izinsimbi, begijima, beqeqesha umzimba wabo, nabo kudingeka baqeqeshe futhi bathuthukise amandla abo engqondo.
Lapho sazi ngokwenzekayo eduze kwethu, kepha ikakhulukazi lapho sizazi thina, siyanaka, Kusenza sibe nemicabango nokuziphatha okugxile ekuzinakekeleni ngokwengeziwe, ukuzihlonipha ngokwengeziwe nokuzazi kangcono, okuthinta impilo yethu ngokomzimba nangokwengqondo.
Ukwenza izivivinyo zokucabanga nokuzindla njalo kunezinzuzo eziningi kithi:
Sinaka kakhulu impilo yethu
Yehlisa amazinga okucindezeleka
Khulisa ukuzethemba kwethu
Kukusiza ulale kangcono
Thuthukisa amakhono okuhlakanipha ngokomzwelo
Ithuthukisa ukugxila nokukhumbula
Thuthukisa ubudlelwano phakathi kwabantu
Kunciphisa ubudlova nobutha
Yehlisa umuzwa wokukhathala, ngokomzimba nangokwengqondo
Ngokuvamile, kusula ingqondo futhi kuyikhulule, kusivumele ukuba sixhumane nesikhathi samanje futhi sigxile kithina, ngokwamukela ngokuphelele imizwa yethu, imizwa nemicabango yethu "ngaphandle kokwahlulela", konke lokhu kuthonya ngqo inhlalakahle yethu. Kulokhu, kufayela lethu le- ezemidlalo kahle. Futhi lapho umgijimi enethezekile, enamazinga amahle kakhulu okuzethemba, ukwenza kusebenze, ukukhuthazeka kanye nokugxila, uyakwazi ukujabulela lokho aqeqeshwe khona futhi akwenze ngokugcwele, yingakho ekwenza kangcono, ukubulawa kwakhe kunembe kakhudlwana. Ngakho-ke, Ukuzijwayeza ukucabangela kuthanda nokusebenza kwezemidlalo.
Ngiyakukhuthaza manje, ukuthi wenze ukuzivocavoca okuncane, ukuqonda kangcono ukuthi kuyini ukucabanga, nokuthi ungakwenza kanjani.
Into yokuqala ukuthola indawo ethule, enomsindo omncane hhayi ukukhanya okweqile ngokweqile. Hlala ume kahle, ngincoma ukubeka izinyawo zakho zibheke phansi, umhlane ubheke odongeni, amahlombe aphansi nezandla zakho kahle emadolweni noma esiswini sakho. Gcina umhlane wakho uqonde, ngoba lokhu ungangehlisa kancane isilevu sakho esifubeni. Vala amehlo akho.
Qala ngokugxilisa ukunaka kwakho lapho ukhona, indawo emaphakathi lapho ukhona, umzuzu wamanje.
Ngemuva kwalokho, chitha imizuzwana embalwa ucabanga ukuthi uqhuba kanjani manje.
Gxila ekuzweleni kwakho ngokomzimba, thatha uhambo lwengqondo kuzo zonke izingxenye zomzimba wakho uhlaziya ngamunye ngamunye ukuthi zinjani, zikhululekile, zishubile, zikhathele ...
Chaza ukumamatheka okuncane bese uhlola umphumela onawo emzimbeni nasengqondweni yakho.
Manje qala ngokunaka ukunaka kwakho ekuphefumuleni kwakho, gxila ekutheni umoya ungena futhi ushiye kanjani. Qaphela ukuthi umoya udlula kanjani emzimbeni wakho futhi unikeze amandla nokwaneliseka nomaphi lapho uya khona. Uma nganoma yisiphi isikhathi ubona ukuthi ingqondo yakho ibalekela ikusasa noma okwedlule, yibheke, wamukele ukuthi ikhona futhi ngendlela enomusa futhi ngaphandle kokudlala, gxila ekuphefumuleni kwakho.
Lapho ufuna, hamba kancane kancane ngokuvula amehlo akho bese uhlaziya imizwa oyitholile kulo lonke lolu vivinyo nokuthi imiphi onayo manje.
Okufanelekile ukwenza ukuvivinya umzimba kwengqondo kaningana ngesonto, sithathe imizuzu embalwa ukugxila kithina futhi siqede imicabango ekhanyayo. Lapho umuntu ethatha lo mkhuba, kukhiqiza umthombo wenhlalakahle yangaphakathi nokwaneliseka komuntu siqu. Okuchazwe kabanzi, njengakuPhil Jacksons nabadlali bakhe, ekusebenzeni kwethu kwezemidlalo.
Njengesiphetho sokugcina, ngithanda ukuhlanganyela leyo nkondlo encane yesazi sefilosofi uMichel de Montaigne, lapho egcizelela khona umqondo wokuthokozela umsebenzi othile owenziwayo, ukwenziwa ngokugcwele kuwo.
Uma ngidansa, ngiyadansa.
Lapho ngilala, ngiyalala.
Futhi lapho ngihamba ehlathini, uma ukucabanga kwami ​​kukhukhula ngiye ezintweni ezikude, ngikubuyisela emuva endleleni, ebuhleni bokuba ngedwa kwami.
UMichel de Montaigne (1533-1592).
Okuningi kwe: Leticia Montoya Ezempilo Nokuqeqeshwa